SPM News: Somali 4.15.22
Published April 15, 2022 at 11:19 AM CDT
Sarkaal sare oo ka tirsan gobolka ayaa sheegay in Waaxda Adeegga Aadanaha ay hubinayso in qaxootiga Afgaanistaan ay haystaan agabkii ay u baahnaayeen si ay dib ugu dejiyaan Iowa.
Arrintan ayaa timid ka dib markii baaritaan ay sameysay Des Moines Register lagu ogaaday in qoysaska qaar ay ku nool yihiin hoteello dhaadheer oo ay cunta la'aantu ka go'day oo aysan la xiriirin karin shaqaalahooda.
In ka badan 75,000 oo Qaxooti Afgaanistaan ah ayaa Mareykanka soo galay tan iyo markii dalkooda uu gacanta u galay Taliban bishii Ogosto ee la soo dhaafay. Tiradan waxaa ku jira qiyaas in ka badan 200 gudaha Sioux City.
Warbaahinta Dadweynaha Siouxland waxay la xiriirtay Guriga Beesha Mary J. Treglia wax ku saabsan qaxootiga deegaanka. Agaasimaha fulinta Becky Carlson ayaa sheegay in ururku uu aad ugu nasiib badan yahay inuu sugo guri maadaama ay gabaabsi ka jirto magaalada Sioux iyo meelo kale.
Ururka aan faa'iido doonka ahayn, oo ay weheliyaan Adeegyada Lutheran ee Iowa, ayaa caawiyay 40 ilaa 50 qaxooti ah. Carlson wuxuu sheegay in dadka Afgaanistaan soo haray loo shaqaaleysiiyay inay u shaqeeyaan shirkad Siouxland ah oo aysan helin adeegyo taageero ah.
Senetarka Maraykanka Chuck Grassley ayaa sheegay inuu ku raacsan yahay ku dhawaaqista madaxweyne Joe Biden ee ah in la ogolaado iibka gaaska xilliga xagaaga oo lagu daray 15 boqolkiiba ethanol. Laakiin Jamhuuriga Iowa wuxuu leeyahay maamulka Biden waa inuu tallaabo dheeraad ah qaadaa isagoo ka dhigaya bayofuel la heli karo sanadka oo dhan.
Musharaxa gudoomiyaha xisbiga Jamhuuriga ee Nebraska Charles Herbster iyo ololahiisa ayaa soo saaray hadallo ay ku beeninayaan sheegashada faraxumeynta ee isaga ka dhanka ah.
Wararka ayaa sheegaya in siddeed haween ah, oo ay ku jirto Senetarka Gobolka Julie Slama oo Sterling ah ayaa sheegay in Herbster uu si aan habboonayn u qabsaday.
Herbster ayaa eedayn dusha uga tuuray gudoomiyaha gobolka Ricketts iyo musharaxa GOP Jim Pillen, isaga oo sheeganaya in sheekadu tahay khiyaano siyaasadeed oo wasakh ah oo ay bilaabeen Ricketts iyo Jim Pillen, musharaxa GOP ee uu taageeray gudoomiyaha.